Tsy fandriampahalemana : miantso ny olom-pirenena ny Fiarovam-pirenena | NewsMada
Tsy fandriampahalemana : miantso ny olom-pirenena ny Fiarovam-pirenena
“Isika olom-pirenena malagasy no tompon’ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana sy ny asa fiarovana.” Tenin’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny Jly Rasolofonirina Béni Xavier, teny Betongolo, omaly.
Anisan’ny fitaovana fotsiny izy ireo noho ny fanaovana fanamiana sy ny fitanana basy amin’ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana. “Misarika ny sain’ny olom-pirenena malagasy rehetra izahay amin’ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana: raha izahay irery, ho lavitra ezaka”, hoy izy.
Tsy misy olon-kafa no manao ireny asa ratsy ireny, fa ny olom-pirenena eto an-toerana ihany. Tsy mbola heno ny hoe olona avy any ivelany no manao an’io. Izay no iantsoany fiaraha-miasa amin’ny olom-pirenena rehetra, tsara sitrapo sy tia ny hivoaran’i Madagasikara izany. “Miankina amin’ny fandriampahalemana misy eto ny fivoaran’i Madagasikara. Mba hahamarin-toerana ny fitondrana izany”, hoy izy.
Hisy indray ny hetsika hiadiana amin’ny halatra omby
Hanao hetsika hiadiana amin’ny halatra omby izay mampinainaina ny any ambanivohitra, indrindra amin’ny faritra be omby: Androy, Anosy, Ihorombe, Atsimo Atsinanana, Matsiatra Ambony, Amoron’i Mania, Bongolava… “Tsy vitan’ny adin’ny dahalo sy ny miaramila fotsiny izany, fa adintsika olom-pirenena malagasy amin’ny asan-dahalo mambotry ny firenena“, hoy izy.
Ny rehetra miaraka no haharesy ny tsy fandriampahalemana sy hametraka ny filaminana. Hahafahan’ny olom-pirenena malagasy, indrindra ny any ambanivohitra, hitodika amin’ny asa famokarana hitondra ho amin’ny fampandrosoana izany.
Mila vahaolana ny fitsaram-bahoaka
Tato ha ato, saika izay tolo-tanan’ny vahoaka izay hatrany no angatahin’ny mpitandro filaminana manoloana ny tsy fandriampahalemana. Inona, ohatra, no ataon’ny vahoaka ifotony manoloana ny fitaovam-piadiana vaovao be tsy fanta-piaviana amin’ny asan-dahalo any atsimo?
Tsy fantatra koa hatramin’izao izay atidohaben’ny halatra taolam-paty, lakolosy… Misy ny fitsaram-bahoaka etsy sy eroa. Tsy fahatokisana mpitandro filaminana sy ny fitsarana? Na tahotra valifaty… Mila fanadihadiana izany, vahaolana azo antoka sy mahomby.